Jamal Khashoggi: Xogta xasaasiga ah ee la helay sannad ka dib - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaJamal Khashoggi: Xogta xasaasiga ah ee la helay sannad ka dib
Riyadh (JigjigaOnline) – Kooxaha u ololeeya Xuquuqda Aadanaha waxay dalbanayaan in cadaallad ay helaan qoyska weriyihii caanka ahaa ee Sacuudiga u dhashay Jamal Khashoggi, sannad ka dib markii lagu dilay Turkiga.
Maamulka Sacuudiga weli ma aysan muujin “isla xisaabtan macno leh”, ayey qortay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigatay hay’adaha Xuquuuqda Aadanaha.
Hay’adahan waxay Boqortooyada ka dalbanayaan in la sii daayo dad kale oo dowladda dhalleeceyn jiray oo weli xabsiyo ku xiran.
“Maamulka Sacuudiga wuxuu xannibay isla xisaabtan wax ku ool ah oo la xiriira dilkii Khashoggi,” ayey tiri hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch.
Hay’adda waxay cambaareysay hadalkii dhowaan ka soo yeeray dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan oo sheegay in uu aqbalay in masuuliyad wadareed ay ahayd dilkii Khashoggi, balse wuxuu beeniyay in isaga si shaqsi ah loogu eedeeyo arrinta.
“Haddii ay dhab ka tahay, amiirka iyo dowladdiisa waxay soo bandhigi lahaayeen maxkamadeyn daahfuran, waxayna shaacin lahaayeen waxkasta oo ay ka og yihiin qorsheynta, dilka iyo ka dib wixii dhacay markii la dilay Jamal Khashoggi,” Waxaa sidaa sheegay Agaasimaha HRW ee Bariga Dhexe, Sarah Leah Whitson.
Saalax Khaashuqji oo difaacay boqortooyada Sacuudiga Iyo Dilkii Loo Geystay Aabbihii
YAAB! ‘Gabadhii aan jeclaaday ee aan muddo shukaansanayay ayaa Kumbuyuutar igu noqotay’